Ra’iisul Wasaare Khayre oo La Kulmay Guddiga Qaban-qaabada Shir-weynaha Dib-u-heshiisiinta Galmudug | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’iisul Wasaare Khayre oo La Kulmay Guddiga Qaban-qaabada Shir-weynaha Dib-u-heshiisiinta Galmudug
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre, ayaa kulan la qaatay xubnaha guddiga qaban-qaabada shir-weynaha dib-u-heshiisiinta Galmudug oo kasoo laabtay socdaal ay ku mareen deegaannada Galmudug.
Kulanka ayaa looga hadlay dardar-gelinta qorshaha dib-u-heshiisiinta Galmudug iyo ka mira dhalinta shir-weynaha Dhuusamareeb ka furmaya August 05,2019 ee la isugu keenayo dhammaan beelaha Galmudug si la isugu diyaariyo dhismaha Galmudug loo dhanyahay.
Guddiga ayaa Ra’iisul Wasaaraha uga warbixiyay najiijadii kasoo baxday kulamadii ay la qaateen iyo farriintii ay gaarsiiyeen bulshada deegaannada Xeraale, Huurshe, Balanbal, Caabuud-waaq, Gaalkacyo iyo Cadaado.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa guddiga faray in laba jibbaaraan dadaallada ay ku gudanayaan waajibaadka ka saaran shirka si loo gaaro hadafka guud oo ah in la helo Galmudug loo dhanyahay oo u adeegta bulshada reer Galmudug, kana qayb qaadata horumarinta qarannimada Soomaaliyeed.
Previous articleGuddiga Qaban-qaabada Dib-u-heshiisiinta Galmudug oo Baaq u diray dhammaan beelaha Galmudug
Next article32 Qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Dalka Afghanistaan